Jaheyntaada ee raacitaanka kulanka sharciga 2019 | MPR News
Jaheyntaada ee raacitaanka kulanka sharciga 2019
People look over the second-floor railing of the Rotunda inside the Minnesota State Capitol in St. Paul, Minn.
Wuxuu noqonayaa sannad siyaasadeed oo xasuus ku leh Minnesota.
Gobolka wuxuu ku leeyahay duqa magaalada ka duwan iyo sameyn cusub ee Sharci dajinta gobolka, oo micnaheeda yahay in labada laamood ee dowlada ay eegeyso arimaha qeyb indho cusub.
• Maamulka Dowlada Dimuqraadiga. Tim Walz iyo Lt. Duqa magaalada. Peggy Flanagan wuxuu balanqaadayaa inuu ahaado mid u xiiso leh oo ka qeybgala. Laakin lixda muddo ee kongoreeska wuxuu ka yahay mid banaanka ah caasimada Minnesota oo waa in sidoo kale ay kormeero qeybsanaanta magaalada iyo baadiyaha ee gobolka oo leh wax ka badan baal hormarayo oo xisbigaan ah.
• Afhayeenka Aqalka Melissa Hortman Melissa Hortman inay hogaamisaa kulanka culus ee deegaanka DFL oo ay wataan xubno badan oo cusub oo ku tartamayo dhaqaajinta degmooyinka iyo heshiis u helida Sanetka lagu qabto GOP.
• Hogaanka Asxaabiyada Paul Gazelka ayaa hogaamiso kulanka Daabacaada Sanetka Dimuqraadiyada, taas oo lagu qabto inta badan labo cod — ama ka yar, waxay ku xirantahay doorasho gaar ah. Gazelka wuxuu xitaa dareemayaa cadaadis badan kulanka xiggo si uwada keeno kooxdiisa si ay u xiraan xeerarka qaarkood, ee wajahayo Guriga DFL-ay qabtaan iyo duqa magaalada.
Arimaha ugu muhiimsan oo la fiiriyo
• Daryeelka caafimaadka: Walz iyo inta ugu badan Aqalka DFL waxay rabaan inay sheegaan qarashka sii kordhayo ee daryeelka caafimaad oo qaabka qaar oo sannadkaan ah. Taasi waxay u badantahay inay gasho dooda miisaaniyada, laakin waxay sidoo kale riixi karaan inay aasaasaan iqtiyaarka iibsiga oo reer Minnesotan ah illaa MinnesotaCare, barmaamijka caymiska dadka ku nool mneedhaqaalohoodu hooseyo. Dimuqraadiyiinta ku jiro Sanetka waxay mar hore riixayaan fikrada.
• Waxbarashada: Dimuqraadiyada waxay sidoo kale maamulaan waxbarashada, labadaba kordhineyso maalgelinta dugsiyada gobolka sidoo kale sida xiritaanka meelaha banaan ee joogtada ah ee Minnesota. Ka fillo gaarar badan sharci dajiyayaasha isbuucaan, laakin taasi waxay u badantahay maalgelilanta liiska, iyo fiirin dhow oo dooqyada waxbarashada hore, sidoo kale sida dugsiyada bulshada ee siiyaa waxbarasho iyo daryeelka canuga hal meel.
• Fasaxa la bixiyo: Flanagan waxay hadeer weydiisay xubnaha bulshada ganacsiga inay ku caawiyaan baasitaanka qaar ka mid ah qaabka fasaxa la bixiyo oo shaqaalaha sannadkaan. Soojeedinta hore waxaa kaliya oo ay sheegtay shaqaalaha gobolka, laakin ka hadlida waxay balaarin kartaa dhammaan badrooniyada.
• Xakameynta hubka: Walz iyo Dimuqraatiyiinta ku jiro Aqalka waxay riixayaan inay balaariyaan baaritaanada taariiqda, baasitaanka loo yaqaan sharciyada illaalada calanka gaduudan iyo mamnuucida hubabka nooca otomaatiga, oo waxay taageero ka heli karaan qaar ka mid ah Jamuuriyiinta.
• Canshuurta gaaska: Walz wuxuu sameeyay sare u qaadista canshuurta gaaska gobolka mudnaanta muddadiisa xafiiska ugu horeysay. Taasi waxay noqoneysaa iibin adag ee Dimuqraadiyiinta maamulo Sanetka, oo dhahay in dheeraadyo loo isticmaali karo mashaariicda wadooyinka iyo buundooyinka.
• Jarida canshuurta: Dimuqraadiyiinta ku jiro Sanetka waxay ka hadlayaan jarida canshuurta, gaar ahaan kadib maqlida aqbaaraha dheeraadyada miisaaniyada $1.5 bilyan. Waxay u moodaan in inta badan lacagtaas ay dib ugu laabaneyso Minnesotans, iyada oo Dimuqraadiyada ay riixayaan inay ku isticmaalaan isticmaalid cusub.